गोर्खाज फाइनान्सको नाफामा आकर्षक बृद्धि, अन्य वित्तीय अवस्था कस्तो ? – Insurance Khabar
गोर्खाज फाइनान्सको नाफामा आकर्षक बृद्धि, अन्य वित्तीय अवस्था कस्तो ?
प्रकाशित मिति : ५ भाद्र २०७६, बिहीबार १०:५९
काठमाडौं । गोर्खाज फाइनान्सले आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको छ । फाइनान्सले यस अवधिसम्ममा आइपुग्दा ७ करोड १० लाखरुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा फाइनाँसको नाफा ५३२ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आथिृक वर्षको सोही अवधिमा फाइनान्सले १ करोड १२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।
कम्पनीले रिजर्भ फन्डमा पनि उत्साहजनक प्रगति हासिल गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा आइपुग्दा फाइनान्सले खुद ब्याज आम्दानी पनि बढाएको छ । यस अवधिसम्म आयपुग्दा फाइनान्सको खुद व्याज आम्दानी १७ दशमलव ९६ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा फाइनान्सले २४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी गरेको छ ।
फाइनान्सले यस अवधिसम्म सञ्चालन नाफामा पनि आकर्षक सुधार गरेको छ । अघिल्लो वर्षमा फाइनान्सले ८८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ को चौ त्रैमाससम्ममा ११ करोड १ लाख ५८ हजार सञ्चालन नाफा गर्न सफल भएको छ ।
फाइनान्सको खराब कर्जा ४ दशमलव ६५, ब्याज प्रतिसेयर आम्दानी ११ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय ४४ रुपैयाँ ४३ पैसा रहेको छ ।